အသင်းသစ်ကိုယ်စီနဲ့ Dota2 Legend နှစ်ဦး | Duwun
Dota2ရဲ့ Legendary ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ Dendi နဲ့ Mushi တို့ဟာ Competitive မြင်ကွင်းကို စွန့်ခွာမသွားသေးဘဲ အသင်းသစ်တွေနဲ့ ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။
Dota2ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လောကမှာ တစ်ချိန်က ဟုန်းဟုန်းတောက်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ Mushi နဲ့ Dendi တို့ဟာ ပရိသတ်တွေကိုယ်တိုင် Legend ဘွဲ့ထူးပေးထားတဲ့ ကစားသမားတွေပါ။
သူတို့ ၂ ဦး ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Dota ကစားသမားသက်တမ်းဟာ တော်တော်လေးကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သလို သူ့ခေတ်နဲ့ သူ့အခါမှာတော့ အတောက်ပဆုံးကြယ်ပွင့်တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တဖြည်းဖြည်း အသက်အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှ အရင်လောက် မစွမ်းဆောင်နိုင်တော့ဘဲ ကစားသမားအသစ်တွေအကြားမှာ နေရာမရဖြစ်လာပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာ BurNing လို အနားယူသွားပြီဖြစ်တဲ့ Legend တွေရှိသလို Puppey တို့ Fear တို့လို တိုက်ပွဲဝင်နေဆဲ Legends တွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ Mushi နဲ့ Dendi တို့ကလည်း ကစားသမားဘဝရဲ့ အကျပိုင်းနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတာတောင် Dota2အပေါ်စိတ်မကုန်သေးဘဲ ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပုံပါပဲ။
သူတို့နှစ်ဦးဟာ မကြာခင်ကျင်းပတော့မယ့် 2019-2020 DPC Season ရဲ့ဒုတိယမြောက် Major Qualifier မှာပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့အတွက် အသင်းသစ်ကိုယ်စီနဲ့ စာရင်းသွင်းလိုက်ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယမြောက် Major Qualifier တွေကို ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ကနေ ၆ ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီး DreamLeague Season 13: Leipzig Major နဲ့ WePlay Bukovel Minor ပွဲတွေမှာ ပါဝင်ခွင့်အတွက် ယှဉ်ပြိုင်သွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Mushi ကတော့ တရုတ်အသင်း Keen Gaming ကနေထွက်ခွာလာပြီးနောက်ပိုင်း SEA မှာပဲ အခြေပြန်ချဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပုံပါပဲ။ သူ့ရဲ့အသင်းအသစ်မှာ SEA ရဲ့ Old School ကစားသမားတွေပါဝင်လာပြီး ကစားသမားစာရင်းကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ အရင်တုန်းက Orange Esports, Team Malaysia စတဲ့ SEA အသင်းဟောင်းတွေကို အမှတ်ရစေမှာပါ။
အသင်းသစ်ကိုတော့ Brothers United လို့နာမည်ပေးထားပြီး YamateH, Ohaiyo တို့လို အသင်းဖော်ဟောင်းတွေနဲ့ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကစားသမားအပြည့်အစုံကတော့
5. Mushi တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်ကစားသမားက ဘယ် role မှာကစားသွားမယ်ဆိုတာ အတိအလင်းမဖော်ပြသေးပေမယ့် ခန့်မှန်းရသလောက်ကတော့ ဒီနံပါတ်စဉ်အတိုင်း ကစားသွားဖို့ ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များပါတယ်။ SEA ရဲ့ Legend ကြီးတွေအနေနဲ့ အရင်လို ရွှေထီးပြန်ဆောင်းဦးမလား ဆိုတာကိုတော့ စောင့်ကြည့်ရဦးမှာပါ။
အရင် Major Qualifier တုန်းက The Pango အသင်းနဲ့အတူပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး Regional Qualifier အဆင့်ထိတောင် မတက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပေမယ့် Dendi တို့ကတော့ စိတ်ပျက်အားလျော့သွားခြင်းမရှိဘဲ ဒီ Major ကို ကိုယ်တိုင်အသင်းသစ်ဖွဲ့စည်းပြီး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တော့မှာပါ။
Dendi ရဲ့အသင်းမှာတော့ CIS ရဲ့မျက်နှာသိပ်မစိမ်းလှတဲ့ ကစားသမားတွေပါဝင်ပြီး အသင်းနာမည်ကိုတော့ Viet Flashback လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်။ ဒီအသင်းမှာတော့
5. LeBronDota တို့ပါဝင်ပါတယ်။
အသင်းသစ်ဖြစ်တာကြောင့် အသင်းရဲ့အလားအလာကိုခန့်မှန်းလို့မရနိုင်သေးပေမယ့် Dendi တစ်ယောက် အသင်းသစ်နဲ့အတူ ကံကောင်းပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။